साहित्य | Samacharpati साहित्य – Page3– Samacharpati
“तिमी छैनौ भएर यो जवानी के गर्नु ”गजल”
”सुमन स्मारिका” घरी घरी लाग्ने गर्छ जिन्दगानी के गर्नु तिमी छैनौ भएर यो जवानी के गर्नु न खान दिन्छ न भोक मेटाउँछ पेटको छन त उसको पनि राहदानी के गर्नु पोखिन देउ बगरले प्यास त मेट्ला थोरै राखेर आँखामा यति धेरै पानी के गर्नु गर्न त गरिन्छ नि रोज दुःखको कारोबार हुँदैन अलिकति पनि आम्दानी […]
स्याङजा, ५ वैशाख । काँधमा छोरा हातमा कपाडाको बोरा, पत्नी उसकी मोटो ज्यान, फुलेका खुट्टा मेरो प्रश्न कहाँ पुग्ने दाइ? उत्तर उसको भाइ बर्दिया, खड्केटारीमा पानी पिउँदै थिएँ पैदल यात्री । किन त, पोखरा नबसी हिंड्नु भाको ? सोधें मैले मलिन हुँदै, एकातिर घरबेटी अर्कोतिर भोक दुईवटा कै चपेटा कसरी थामुँ भाइ? मरे बरु घरमै […]
स्याङजा, १ वैशाख । कसैले सेताे कात्राे ओडेकाे बेला! कसैले सेताे कात्राे ओडेकाे बेला म नयाँ लुगाँ लाउँ कसरी ? विश्वनै शेकमा डुबेकाे बेला, विश्वनै शेकमा डुबेकाे बेला म शुभकामनाकाे गीत गाउँ कसरी ? कसैले सेताे कात्राे ओडेकाे बेला ! म नयाँ लुगाँ लाउँ कसरी ? तिमि रात दिन भेट्ने मात्र कुरा गरछाैँ , दुनियाँनै […]
भुक्नेहरु सबै टोक्ने हुदैनन् नभुक्दैमा नटोक्ने पनि त हुँदै होइनन् हर मर्द जो न बलात्कारी हुन्छ न त बिना बलात्कारी कोहि बलात्कृत हुन्छ त्यसैले, न त भुक्ने हरुको भर हुन्छ नभुक्नेको त झनै डर हुन्छ दर्पनमा हेर्दा अफ्नो प्रतिबिम्ब अहो पुरुष हुनुमा लज्जा छ आज हर छोरीको बाउहरु जो ममता छोरीको एकातिर त अर्कोतिर टोलमा […]
पोखरामा पत्रकार पराजुलीको कथासग्रह कुमाता सार्वजनिक
पोखरा, २९ फागुन । महिलाको यौन मनोविज्ञानमा आधारित पत्रकार वसन्त पराजुलीको कुमाता कथासंङग्रह विहिवार पोखरामा सार्वजनिक गरियो । पत्रकार सम्मेलन गरेर पराजुलीले आफ्नो कथासङग्रह सार्वजनिक गरेका हुन् । गत सोमवार चितवनमा गृह विमोचन भएको कुमाता कथासंङग्रह पोखराका पाठकहरुका लागि केन्द्रित गर्दै पोखरामा पनि एक कार्यक्रमका विच सार्वजनिक गरिएको हो । सामाजिक यथार्थवादी र महिला यौन […]
पोखरा, १८ माघ । विभिन्न विधामा कलम चलाउँदैआएका अलौकिक कवि देशभक्तसिंह कुँवरको पछिल्लो कृति सिजोसङ्ग्रह ‘तमन्ना’ लोकार्पण भएको छ । मुमताज मल्टि मिडिया प्रालिको आयोजनामा पोखरामा शनिबार आयोजित समारोहमा गायिका बाबा राणाले सो कृतिको लोकार्पण गरिन् । सो अवसरमा कुँवरद्वारा तीन साताअघि प्रकाशित ‘सामना’ सिजो सङ्ग्रहको दोस्रो संस्करणसमेत सार्वजनिक गरियो । २०७४ मंसिर १६ यता उनले […]
खड्का महेन्द्र कुमार मात्रै तीन दिन बाँचेको भए तिम्रो भई मर्ने थिएँ । यदि स्वर्ग हुन्छ भने सिधै स्वर्गमा म त तर्ने थिएँ । सङ्गसङ्गै हिड्ने मन थियो जीवनमा हात समाई तिमीले किनेको सिन्दुरले मेरो सिउदो भर्ने थिएँ । कल्पनामा सिमित भए जिन्दगीका चाहाना ती तिम्रो नाम उज्ज्वल बनाई प्रकाश म छर्ने थिएँ । जति […]
खड्का महेन्द्र कुमार माया गर्छु भनी मलाई त आखिरीमा दास बनायौ नामको मात्रै बाँचेको छु मलाई ज्युँदो लास बनायौ खेल्यौ मेरो भावना सङ्ग कुन जुनीको बदला लिन मेरो मनमा पिरै पिरको कति ठुलो यो रास बनायौ जे जे भन्यौ माने मैले हेर निश्छल थियो मेरो माया छल गरेर छोड्यौ मलाई अर्कैलाई पो खास बनायौ मुखमा […]
पोखरा, ८ माघ । वलराम स्मृति वाङ्मय प्रतिष्ठान भरतपुर चितवनले यस वर्षको वलराम स्मृति वाङ्मय पुरस्कार महाकाव्यकार जनार्दनशरण त्रिपाठी र समालोचक डा.वावुराम अधिकारीलाई प्रदान गरेको छ । प्रतिष्ठानले पोखरामा बुधबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरी महाकाव्यकार त्रिपाठी र समालोचक अधिकारीलाईलाई पुरस्कार प्रदान गरेको हो । कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि स्या·जा साहित्य प्रतिष्ठानका अध्यक्ष विश्वप्रेम अधिकारी र वलराम […]
पोखरा, ५ माघ । गुरुङ साहित्यिक मञ्च नेपालले आगामी चैत २१ गते मञ्चको तेस्रो स्थापना दिवसका अवसरमा कविता प्रतियोगिता गर्ने भएको छ । मञ्चको पोखरामा सम्पन्न बैठकले कविता प्रतियोगितासहित साहित्यिक प्रशिक्षण कार्यक्रमको आयोजना गरी स्थापना दिवस मनाउने निर्णय गरेको मञ्चका अध्यक्ष गौरी तमूले जानकारी दिनुभयो । बैठकले कविता प्रतियोगिता सम्पन्न गर्न कवि चन्द्र गुरुङको संयोजकत्वमा […]